Proxmox VE 7.0 inouya nerutsigiro rweBtrfs, Linux 5.11 uye zvimwe | Kubva kuLinux
Proxmox VE 7.0 inosvika nerutsigiro rweBtrfs, Linux 5.11 uye nezvimwe
Darkcrizt | 09/07/2021 08:21 | Yakagadziridzwa ku 09/07/2021 16:22 | Kugoverwa
Shanduro itsva ye Proxmox iyo Virtual Nharaunda 7.0 (zvirinani kuzivikanwa seProxmox VE) Yakatoburitswa uye mune iyi vhezheni nyowani kuvandudzwa kwakati wandei kunoratidzwa, bug fixes uye, pamusoro pezvose, dzimwe shanduko dzinonakidza dzakaunzwa, dzacho kutsigirwa kweBtrfs, nyowani yakaparadzana ACME plugin, pakati pezvimwe zvinhu zvinomira.
Kune avo vasina kujairana neProxmox VE, vanofanirwa kuziva chiie kugovera uku kunopa nzira dzekushandisa yeindasitiri yegiredhi chaiyo server system ine web-based manejimendi, yakagadzirirwa kubata mazana kana kunyange zviuru zvemachina chaiwo. Kugovera kwakavakira-mukati maturusi ekurongedza backup enharaunda dzenzvimbo uye kunze-kwe-kwebhokisi rutsigiro rwekusanganisa, kusanganisira kugona kutamisa enharaunda nharaunda kubva kune imwe node kuenda kune imwe pasina kukanganisa basa.
Pakati pezvinhu zvewebhu interface: tsigiro yeVNC yakachengeteka koni; basa-rakavakirwa mukana wekutonga kuzvinhu zvese zviripo (VM, kuchengetedza, node, nezvimwewo); tsigiro yemaitiro akasiyana-siyana ekusimbisa (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE kuvimbiswa).
1 Main nyowani maficha eProxmox VE 7.0
2 Proxmox VE 7.0 Dhawunirodha uye Kutsigira
Main nyowani maficha eProxmox VE 7.0
Mune ino vhezheni nyowani yeProxmox VE 7.0, iyo system base inoratidzwa yakagadziridzwa kuita Debian 11 (Bullseye) pamwe nekernel ye Linux yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.11.
Ye shanduko dzinonyanya kuzivikanwa dzinomira mushanduro iyi nyowani, semuenzaniso, iyovhezheni itsva yeCeph 16.2 inogoneswa masumbu matsva, iyo balancer module inogoneswa nekumira kuti zvirinani kugovaniswa kwemapoka ari muOSD.
Imwe shanduko yakakosha ndeye rutsigiro rweFS Btrfs, kunyangwe pachikamu chemidzi chinotsigira kushandiswa kwezvidimbu zvezvikamu, zvakasanganiswa RAID uye kuongorora kwechokwadi kwedata uye metadata uchishandisa macheki.
Panel "Zvinyorwa" zvakawedzerwa kune iyo webhu interface, iyo inorerutsa manejimendi eAPT package repositories, ruzivo rwacho rwunounganidzwa munzvimbo imwechete (semuenzaniso, unogona kuyedza vhezheni nyowani dzeCeph nekumisikidza iyo test repository uye nekuremadza kudzokera kune akatsiga mapakeji).
Iyo yekumisikidza nharaunda yakashandiswazve, iyo inoshandiswa nayo chinja_root pachinzvimbo chroot, inopa otomatiki kuona kwe HiDPI kuratidza Kuti usarudze saizi yefonti, kuona kwemufananidzo kwakagadziridzwa. Iyo algorithm zstd inoshandiswa kumanikidza initrd uye squashfs mifananidzo.
MuManotsi, rutsigiro rweMarkdown rwakawedzerwa manotsi ane interface yekuratidzira mune HTML fomu.
Basa rekuchenesa disks rakarongedzwa kuburikidza neGUI.
Yakavandudzwa vhezheni LXC 4.0, QEMU 6.0 (nerutsigiro rweiyo asynchronous I / O interface io_uring yevaenzi) uye VhuraZFS 2.0.4.
Tsigiro yakapihwa tokeni (semuenzaniso YubiKey) sekiyi dzeSSH paunenge uchigadzira midziyo uye uchigadzira mifananidzo ine gore-init.
Kusaina kusaina-pa (SSO) rutsigiro kwakawedzerwa kuti ipe imwechete-yekuisa poindi uchishandisa OpenID Unganidzo.
Yakaparadzaniswa ACME plugin (inoshandiswa kuwana Ngatinyorore zvitupa) yakawedzerwa nerutsigiro rwakagadziridzwa renharaunda dzine zvese IPv4 neIPv6 yekubatana.
Nezvemagetsi zvakakonzera backups, iwe unogona ikozvino kugonesa kuchekerera pamwe nechinangwa chekuchengetedza backup chengetedzo marongero, kana akagadzirirwa.
Izvozvi zvave kugona kuchenesa disks kubva kuGUI, zvichikubvumidza iwe kudzima ma disks aimbove achishandiswa uye kugadzira matsva matsva paari.
Zvekuisa nyowani, iyo ifupdown2 network yekubatanidza maneja inoshandiswa nekutadza.
Chrony inoshandiswa seNTP sevha yekumisikidza panzvimbo pe systemd-timesyncd.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni nyowani yekugovera, unogona kutarisa izvo zvakaziviswa. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Dhawunirodha uye tsigira Proxmox VE 7.0
Proxmox VE 7.0 yave kuwanikwa kurodha pawebhusaiti yayo mukuru. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Kune rimwe divi, iyi Proxmox Server Solutions inopawo rutsigiro rwebhizinesi kutanga pa € ​​80 pagore pane processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Proxmox VE 7.0 inosvika nerutsigiro rweBtrfs, Linux 5.11 uye nezvimwe
Imba Edge, IoTivity uye EdgeX Foundry: Samsung Vhura Source - Chikamu 2